के एकमुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्दैमा मनोकामना पुरा हुन्छ ? यस्तो छ विश्वास अनि भ्रम - Sabal Post
के एकमुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्दैमा मनोकामना पुरा हुन्छ ? यस्तो छ विश्वास अनि भ्रम
यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा ।
सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ । लोकश्रुति अनुसार, एउटा बोटमा यस्तो रुद्राक्ष १२ वर्षमा तीनवटा मात्र फल्छन् । जसमध्ये एउटा आकाश र अर्को पातालमा जान्छ भने तेस्रोचाहिँ धर्तीमा रहन्छ ।
काठमाडौं । धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरु को रूप मा वर्णित गरिएको छ । यी नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ । शनि सूर्य भगवानको पुत्र हो र मकर कुकुरको मालिक हो। हरेक हप्ता शनिमा तेल दान गर्ने परम्परा रहँदैं आएको छ ।ज्योतिषका अनुसार, शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ उर्जा ल्याउन सक्नुहुन्छ । शनि देवसँग सम्बन्धित केही खास चीजहरूबारे अत्यत्तैं जानकार हुनुपर्दछ । आज हामी यसैं बारेमा कुरा गरिरहेका छौं । आउँनुहोस् जानौं शनिदेवसँग जोडिएका केही महत्वपुर्ण कुराहरु…
१) शनि देवलाई एक महत्त्वपूर्ण देवता भनिएको छ, किनभने शनि देवले हाम्रो कार्यहरूमा फल प्रदान गर्दछ।
२) शनी भगवान सूर्य को पुत्र हो र उसको आमा को छाया छ। यमराज उनका भाइ हुन र यमुना उनकी बहिनी हुन ।
३) शनि देवको मानवका लागि शुभकामना छ जसले कडा परिश्रम, अनुशासनमा र धर्म पछ्याउने काम गर्दछ उसको सम्मान गर्नुपर्दछ ।
४) शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नु पर्छ।
५) यो समय शनि धनु राशिमा रहेको छ । यसकारण वृश्चिक, धनु र मकर राशिमा पनि शनिको साढे सातको दशा रहेको छ । वृष र कन्या राशिमा भने ढय्या छ ।
६) हरेक शनिबार शनिको साथ, पिपलको पनि विशेष पूजा गर्नुपर्छ। पिपल र खुर्सानीमा पानी छर्कनुहोस् ।
७) शनीमा तेल चढाउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि तेल वरपरमा पर्दैन।
८) शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्। छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ।
९) हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। तेलको सामने तेलको दिपलाई जलाउने गर्नुहोस्
१०) हर शनिबार हनुमान को सामुन्ने सर्सुको तेल को दीप जलाएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुपर्दछ ।
सुनको मूल्य बढ्दै
नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा माघी महोत्सव सुरु
उपनिर्वाचनका लागि छापिएको मतपत्र मंसिर ७ गते…
सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु